Ihe mpempe akwụkwọ: 6 Ngwa ntanetị Web iji nweta data n'enweghị ngbanwe
Kemgbe Intanet malitere itolite banyere ogo na ogo data, ulo oru ntanetị, ndị na-eme nchọpụta, ndị na-ahụ maka data na ndị mmemme malitere ịchọta ngwá ọrụ iji wepu data sitere na weebụsaịtị dị iche iche buru ibu ma dị nta. Ma ọ dị mkpa ka ị wepụ data site na mmalite ma ọ bụ nwee ọrụ nyocha, ndị a ngwaọrụ ntanetị ga-enweta ozi maka gị n'enweghị nzuzo.
Ịbụ ụda Firefox a ma ama, E nwere ike ibudata Hubwit Hub ma tinye ya na nchọgharị Firefox gị. Ọ bụ ngwa gbakwunyere Firefox dị ike nke nwere ọtụtụ nzacha weebụ. Site na igbe ahụ, ọ nwere ụfọdụ njirimara njirimara data nke ga-eme ngwa ngwa gị ngwa ngwa. Iwepụ ihe ọmụma site na saịtị dị iche iche na Outwit Hub adịghị achọ ihe ọ bụla mmemme mmemme, na nke ahụ bụ ihe na-eme ngwá ọrụ a na nhọrọ nke ndị na-abụghị programmers na ndị na-abụghị nkà na ụzụ. O nweghị ihe ọ ga-eri ma jiri ohere ya mee ihe iji kpochapụ data gị, na-enweghị mmebi na àgwà.
2. Nchịkọta Weebụ (nchịkọta Chrome):
Ọ bụ ihe dị iche iche ntanetị weebụ iji nweta data n'ejighị koodu. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, anyị nwere ike ikwu na Web Scraper bụ ihe ọzọ na mmemme Outwit Hub. Ọ bụ naanị maka ndị ọrụ Google Chrome na-enye anyị ohere ịmepụta saịtị nke saịtị anyị ga - esi na - agagharị. Ọzọkwa, ọ ga-ehichapụ ibe weebụ dị iche iche, a na-enwetakwa ntinye n'ụdị faịlụ CSV.
Spinn3r bụ nhọrọ dị oke mma maka ndị mmemme na ndị na-abụghị ndị na-eme ihe nkiri. jikwaa pasent 95% nke ọrụ ntanetị na ntanetị weebụ Na mgbakwunye, usoro a na - enye ohere ka anyị wepụ data ahụ site na iji mkpụrụokwu kapịrị ọnụ, nke ga - ewepụ ọdịnaya ahụ na - adịghị mkpa n'oge ọ bụla.
Fminer bụ otu n'ime kọmputa kachasị mma, kachasị dị mfe na onye ọrụ-weebụ na-enyocha ihe ntanetị na ịntanetị. Ọ na-ejikọta atụmatụ kachasị mma nke ụwa ma bụrụ ebe a ma ama maka akara ihuenyo ya, ebe ị nwere ike ịlele data a kpọpụtara tupu ya echebe gị diski ike ma ọ bụrụ na ị chọrọ iwepụ data gị ma ọ bụ nwee ọrụ ntanetị weebụ, Fminer ga-arụ ọrụ niile.
Dexi.io bụ ama ama ihe ntanetị weebụ na ngwa data. Ọ dịghị mkpa ka ibudata ngwanrọ ahụ ka ị nwere ike ịrụ ọrụ gị na ntanetị. Ọ bụ n'ezie ngwanrọ na-eme nchọgharị nke na-enye anyị ohere ịchekwa ozi ndị a na-achọtara na nchịkọta Google Drive na Box.net. Ọzọkwa, ọ nwere ike mbupụ faịlụ gị na CSV na JSON formats ma na-akwado data na-ekpochapụ aha ya maka ihe nnọchiteanya nke proxy ya.